उपमेयर श्रीमती कुट्ने श्रीमानले श्रीमतीको नाङ्गो फोटो टाँस्ने धम्की, पेट्रोल छर्केर मार्ने प्रयास ! – Todays Nepal
उपमेयर श्रीमती कुट्ने श्रीमानले श्रीमतीको नाङ्गो फोटो टाँस्ने धम्की, पेट्रोल छर्केर मार्ने प्रयास !
यि अनि यस्ता शब्द र प्रश्न सुनेर मन अमिलो भइरह्यो । आज फेरि घरमा तनाव हुने भो भन्ने लाग्यो । मन आत्तियो । एक्लै घर आउने हिम्मत भएन ।
भक्तपुरको बालकोटमा रहेकी आमालाई फोन गरेँ । आमा आज मसँगै मेरो घर जाऔं न, ज्वाइँ फेरि बौलाएछन् । यस्तो यस्तो भन्दैछन् । तपाईं हुनु भो भने केही भन्नु हुन्न की ! भने । आमाले म जानै पर्छ र भन्नु भो । आमालाई पनि दुःख दिन त मन थिएन । तर ममाथि भइरहेको हिंसाको श्रृखंलाबारे आमालाई जानकारी भएकाले मात्रै त्यो दिन हुनसक्ने खतराबाट जोगिन आमालाई आग्रह गरेकी थिएँ ।
घर पुग्दा जग्गा सम्बन्धी विवादको विषयमा कुरा गर्न दुई जना देवरहरु घरमा आउनुभएको थियो । विवादको विषयमा कुरा राखेर उहाँहरु जानु भो । उहाँहरुको अगाडि श्रीमानले एक शब्द समेत बोल्नु भएन । म शारीरिक र मानसिक थकाईले लखतरान थिएँ । उहाँहरु गएपछि ओछ्यानमा पल्टिएँ । उहाँ कोठामा प्रवेश गर्नु भो । चुकुल लगाउनुभयो अनि प्रश्न गर्नु भो ‘तँ दिनभर कहाँ थिइ्स् ?’
मैले आफू गएका र उपस्थित भएका सबै कार्यक्रम बारे, ठाउँ र समयसहित बेलिविस्तार लगाएँ । तर पनि उहाँ कुरा सुन्न तयार हुनुभएन । अपमानजनक शब्द बोल्दै हिर्काउन शुरु गर्नु भो । कहाँ कहाँ, कसरी हिर्काउनु भो थाहा पाइन् । आँखामा हिर्काउँदा त बिजुलीको झड्का लागेजस्तो मात्रै थाहा पाएँ । म ढलें । हार गुहार गर्न थाले । मेरो चिच्याहट सुनेर भाडामा बस्ने भाइहरु आउनु भो ।
घटना यसैपाली माघ महिनाको हो । याक एण्ड यती होटेलमा नेपाली काँगेसका एक जना नेताको पार्टीमा सहभागी हुनुपर्ने थियो, उपमेयर र काँग्रेस कार्यकर्ताको हैसियतले । पार्टी ६ बजेबाट शुरु भयो । मेरो श्रीमानले मलाई घर पुगिसक्नु पर्ने अन्तिम समय तोकिदिएका छन् – सात बजे । तर म पार्टीमा पुग्दैमा ७ बज्न लागिसकेको थियो ।
पार्टीमा पुग्दा नपुग्दै मलाई घर फर्किने तनाब भइसकेको थियो । देखिएकासँग बोल्न पनि भ्याइन । घर पुग्नुपर्ने हतारमा थोरैसँग बोले, धेरैसँग टाढैबाट हात हल्लाएँ । दरबारमार्गदेखि, माइतीघर, थापाथलीको जामले हतारहतार घर पुग्दा ठिक ९ बजेर १७ मिनेट भएको थियो । श्रीमान साथमा नभएको बेला म घर पुगेको त्यो समय सायद मेरो जीवनकै सबैभन्दा ढिलो समय थियो ।
विहे पश्चातको उहाँको अधिकांश समय यसरी नै बित्यो । दुई चार दिन काम गर्यो । काम छोड्यो । त्यहाँबाट आएको पैसाले जाँड खायो । आज एक भोली अर्को गर्दै कैयौं महिलासँग मोज मस्ती गर्यो । उहाँलाई छोराछोरी र हामी श्रीमतीप्रति न माया न विश्वास । महिला फेरिरहनुपर्ने सायद उहाँको जीवनको सबैभन्दा ठूलो सोख, लक्ष्य अनि कमजोरी पनि । उहाँलाई जीविकोपार्जनका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन र गर्नु पनि भएन । मैले कमाएको पैसाले जाँड खाने अनि मलाई नै पीडा दिने ।
एक दिन म अफिस गएको बेला देवर नाता पर्नेहरुले मेरो श्रीमान र काम गर्ने महिला दक्षिणकाली मोटरसाइकलमा घुम्न गएको कुरा सुनाए । अनि हामी पनि पिछा गरेर दुबैलाई पक्रिने योजना बनाई दक्षिणकाली गयौं । ति महिलाले मोटरसाइकलमा बसेर मेरो लोग्नेको कम्मरमा अँगालो हालेकी थिइन् । बीच बाटोमा समात्यौं ।
म उपमेयर अर्थात् न्यायिक समितिको संयोजक । उहाँसँग बिहे भईसकेपछिका २६ वर्ष उहाँका प्रश्न, आरोप, कुटपिट, गाली बेइज्जती र अपमान सहेर बिते । मेरो स्वतन्त्रता के हो ? मैले खोजिन । प्रेम विवाह गरेर गरेका कारण माइतीमा पनि धेरै भन्ने आँट गरिन । सके जति सहेर बस्ने सोच बनाए । तर उहाँको प्रेम पाउने र जीवन खुसी हुने मेरो कल्पना कल्पनामै सिमित भो ।
निर्वाचन जितिसकेपछि उहाँले पटक पटक, हरेक दिन, हरेक घण्टा प्रश्न गर्न थाले पछि म सँगै हिँडिदिनुस् । म के के गर्छु । को को सँग भेट्छु । मेरो काम, कर्तव्य के हो बुझिदिनुस्, सँगै हिँडिदिनुस् भनि आग्रह गर्दा समेत म तेरो भरिया हो र त सँगै हिँड्नलाई भन्ने । उल्टै अरु अरु उपमेयर महिलाका श्रीमानको नाम लिएर उ जस्तो जोईटिंग्रे होइन म भन्ने । यसो गर्दा पनि हुने, उसो गर्दा पनि नहुने ।
ललितपुरवासीको विश्वासले यो ठाउँमा आएकी छु । अबका चार वर्ष जनताको पक्षमा धक फुकाएर काम गर्ने सोच बनाएकी छु । निर्वाचन जिते पछिको एक वर्ष जनताको काम भन्दा धेरै श्रीमानका प्रश्न र छेकबारहरुको सामना गर्दै बित्यो । अब मलाई जनताको काम गर्ने कुरामा कुनै र कसैले तोकिदिएको समय सीमाले अर्थ राख्ने छैन । कुनै गोष्ठि, सेमिनारको चिठी आउँदा कसरी जाने होला भन्ने कुराले तनाव हुने छैन । जतिसुकै बेला जनताले बोलाएको ठाउँमा जानबाट कसैले रोक्ने र छेक्ने छैनन् । म स्वतन्त्र हुनेछ ।
(महिलाखबरसँगको कुराकानीमा आधारित)
यसकारण पनि आवश्यक छ नियमित सेक्स: नत्र देखिन सक्छन् यस्ता मानाषिक समस्या